N'ogbe Mkpa Mkpa Mbara Mbara Mmanya, Nweta Humidifier | AromaEasy
* Anyị na-arụ ọrụ n'azụ arụ ọrụ
* You na-etinye uche n'ịzụlite azụmaahịa gị
Ngwakọta kachasị mma maka ọnụ ahịa mmanụ dị mkpa
OLEE ANYA KA ANY F GRB GR IZU EGO?
Ọ bụrụ na ị nwere ike itinye ego karịrị $ 500 na ngwaahịa, anyị nwere ike inye aka mee ngwaahịa gị, hazie ngwugwu, ma mezuo nrọ ika gị.
Anyị nwere ike ịchọrọ ihe niile ecomerce gị chọrọ, gụnyere akara nkeonwe, akwụkwọ mmado FNSKU, ibuga na Amazon, ịkwanye na China maka ndị na-ere ụlọ ahịa.
Nkwakọ ngwaahịa ahịa
Dị ka onye na-ere ere, ị ga-enye otu ngwaahịa dị ka asọmpi gị. N’ezie, ọnụahịa dị ala nwere ike ime ka ị maa mma karịa, mana ị ga-emecha mee ka azụmahịa gị ghara ịba uru. Eledala anya nke ike iji jiri ya mee ihe ọ bụla. Anyị wuru maka ndị na-ebubata nsogbu, obere azụmahịa na onye ọ bụla n'etiti.
Anyị mere "ọrụ ruru unyi" ka ị nwee ike ilekwasị anya na ahịa ahụ!
Custom chọrọ aha mmado? Anyị kpuchie gị. Ọbụna anyị nwere ike ịnye ọrụ imepụta ọkachamara na ngwa ahịa ahaziri iche nke ejiri aka na agba ọsọ.
nwere ike inweta onyinye dị iche iche dabere na ịchọrọ ahịa. Anyị na-enyekwa ọrụ ntanetị ma ọ bụrụ na ịnwere mkpa ngwakọta ngwaahịa dị iche iche ma ọ bụ nnukwu iwu
Y’oburu n’inwe echiche ahia (kickstart, crowdfunding), mana imaghi otu esi emeputa ya, anyi n’edughari n’ihu n’uzo.
Anyị nwere ike ịnye ọnụahịa dị ala, ndị otu egwuregwu 20, yana ụzọ ndị ọzọ iji kwado azụmahịa gị na-eto eto.
Ricnye ọnụahịa dị mma
Ọdịdị ọnụahịa anyị doro anya ma enweghị ụgwọ zoro ezo na ya. Ọnụahịa anyị bụ otu n'ime asọmpi kachasị n'ụwa, ma ọ bụ naanị obere nke ihe ndị na-emepụta America ma ọ bụ European ndị ọzọ na-ebo gị ebubo. Epekele na obere olu na mkpa mgbakọ. Anyị na-anwa ike anyị iji chekwaa ego na oge gị.
N’afọ niile anyị, anyị ji mpako na anyị na-ejigide usoro nnyefe na-agafe oge 99%. May nwere ike ịhọrọ DHL na ọrụ ozi ndị ọzọ maka itule ọsọ na mmefu ego. Anyị na-eji ọrụ sitere n'aka ụlọ ọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ma ama.
Ọrụ Ndị ahịa 24 awa
Mgbe ọ bụla ị nwere nsogbu ọ bụla, ị nwere ike ịbịakwute onye ọrụ ndị ahịa dị ndụ iji zaghachi ozi ịntanetị ma ọ bụ ozi gị.
Ell ree ya, anyị bu ya,
Keep na-erite uru.
Iwu gị ebugharị ozugbo na ebe mmezu Amazon. Nhọrọ n house ụlọ na-ede ya n and ihi ma na-ejikota.
Kitta Mkpa Mkpa
Natura Osisi Diffuser
Nchekwa mmanụ dị mkpa
3D iko diffuser
Vidiyo banyere akwa ọgwụ mkpa mmanụ
ndị kasị ewu ewu
Ihe kachasị ewu ewu na akwa mmanụ dị mkpa
You na-ahụta ihe iseokwu mgbe ị na-azụ onye na-ere ihe na mmanụ dị mkpa na onye na-emepụta ya
O siri ike ịchọta ma họrọ onye ga-eweta mmanụ dị ntụkwasị obi dị mkpa.
Onweghi ike mmanu nke mmanu di nkpa si n’ahia a, ndi n’enye few nye ihe puru iche nkwa ocha na ndu mmanu di nkpa. Ọzọkwa, mmanụ dị mkpa adịghị n'okpuru iwu FDA.
Ogologo ndu ndu nke mmanu di nkpa n’aka ndi n’enye gi, na oge Mbuga abughi nkwa.
Ndị na-enye mmanụ dị ole na ole ga-eweta Ngwọta Mgbe You na-eche nsogbu gbasara mmanụ ọrụ dị mkpa.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ebubata ihe na-ekwu na ha na-eche banyere obere ụlọ ọrụ, n'ezie na-achọghị.
Ndị na-enye vidio ole na ole nwere ọrụ zuru ezu na ndị nrụpụta mmanụ dị mkpa, Manufactzụpụta, Szụ ahịa, mmepe azụmaahịa, Nkwado nka na ụzụ, na Afterzụ Azụ.
Ihe Mere Họrọ Aro
Oke-mkpa ogo mmanụ na diffusers na a N'ogbe ọnụahịa Anyị nwere ihe kasị mma diffuser omumuihe ke China diffuser ụlọ ọrụ, na mkpa mmanụ sitere si uwa ugbo.
Ndị ọrụ anyị na-agbaso UL, ETL, TUV, ISO, KC, IC, SAA, C-Tick, RoHS, FCC, CE & GS, ma jikwaa ndị na-emepụta ihe na ndị ọrụ iji hụ na ọ dị mma.
Site na ị nweta ngwaahịa na mmepụta, AromaEasy nwere usoro njikwa zuru oke yana nyocha dị mma. Anyị na-enyere aka azụmaahịa gị Anyị na-eche maka azụmaahịa gị!
AromaEasy nwere ndị ọrụ aka ọrụ aka ịnye gị ọzụzụ na ọrụ ndụmọdụ nka iji nyere aka azụmaahịa gị. Ọrụ ndị a anaghị akwụ ụgwọ.
Uto ahia anyi dabere na uto ahia gi.profrọrọ oru ya na nkesa anyi Aghota omuma ahia kachasi nma nke a choro maka udiri azumahia ya.
AromaEasy nwere lọjistik na nkesa ndị ọkachamara, iji hụ na ngwaahịa gị na nnyefe ziri ezi na oge. Onye na-ere ahịa mgbe ọ bụla na-aga na ịntanetị mgbe niile, nzaghachi ngwa ngwa n'ime awa 24.
Ugbo Ugbo anyi
AromaEasy na - arụ ọrụ na ndị na - emepụta ntụkwasị obi sitere na gburugburu ụwa, iji mee nkwa maka mmanụ anyị dị mkpa. Nke ahụ bụ nanị mmalite.
Anyị guzobere ụlọ nyocha ọ bụla maka isi mmalite ọ bụla na kọntinent isii, iji hụ na onye ahịa ọ bụla nwetara mmanụ dị ezigbo mkpa.
Ọzọkwa, anyị na-ewetara onye ọ bụla anyị na-arụ ọrụ ụkpụrụ dị elu dị elu, na-eduga ndị na-eweta ngwaahịa iji melite omume ha iji nọgide na-agbaso ụkpụrụ anyị.
A na-ere ahịa ahịa ahịa kacha mma ka mma
Chọgharịa anyị ige
Mmeputa uzo esi ere mmanụ di nkpa
The Production ahịrị AromaEasy adopts eruba ọrụ, akpaaka na elu arụmọrụ arụmọrụ.
Usoro mmepụta nwere ike izute oke nke ihe na-esi ísì ụtọ karịa 200,000 kwa ọnwa. Anyị na - ewetakwa ndị ahịa si n'ụwa niile ihe dị nde abụọ na - esi ísì ụtọ kwa afọ.
Ndị ọrụ ahụ enwetala ọzụzụ dị iche iche. Utọ ikike imepụta ya na ụdị ọrụ ọkachamara kwekọrọ na-enye nkwenye a pụrụ ịdabere na ya maka imepụta ụdị ihe na-esi ísì ụtọ dị elu ma dị ọnụ.
A na-ejikwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ ahụ nke ọma dịka nkọwapụta nke 5S iji hụ na ịdị ọcha, usoro, arụmọrụ yana nchekwa nke ogbako ahụ.
Mmekọrịta Anyị kwesịrị inwe ekele
Oge izizi banyere AromaEasy. Onye na-ere ahịa a tụkwasịrị obi nke ukwuu ma nwee ntụkwasị obi na mbufe ọsọ ọsọ na USA. Ajuju ajuju niile di nziza. Ga-azụta site na AromaEasy ọzọ! Ekele dịrị m !.
Withzụ ahịa na AromaEasy na-arụ ọrụ ịtụnanya na ọfụma. Ọbụla na mkpuchi mkpuchi njem yana ọrụ sochiri.
N'ogbe mkpa mmanụ diffuser
Ọ masịrị m iji Aromaeasy mepụta ngwaahịa m. ha bu ihe ndi di elu di nma ya na ndi n’ere ahia na achoro oru ma soro anya ha di elu. Ọzọkwa, ịchịkọta ngwugwu m na-enyere aka ịtọpụ atụmanya m nke inweta ihe ebuga na USA.
AromaEasy® na-enye gị ngwaahịa aromatherapy kachasị mma iji kwado ọdịmma gị.
AromaEasy nwere ihe karịrị afọ 12 na ahụmịhe na ụlọ ọrụ na-esi ísì ụtọ. Anyị na-enye diffuser na mkpa mmanụ na n'ùkwù ahịa, na-eduga ndị ọzọ na-eweta. A na-erekwa ndị na-ekesa mmanụ anyị dị mkpa n'ụwa niile na ọnụego nke 130 nde kwa afọ. Mgbe afọ nke mmepe, AromaEasy anọwo n'ọkwá na-eduga na R&D n'etiti ụlọ ọrụ nke otu azụmahịa ahụ. Anyị ịzụlite n'elu 30 ọhụrụ ụdị nke okpukpo diffusers kwa afọ na-enye ahaziri ọrụ n'ihi na ị.
Banyere usoro njikwa ogo anyị
AromaEasy nwetara ọtụtụ asambodo dika ISO9001, ISO14001, BSCI, na OHSAS18001. Mmanụ niile dị mkpa nke AromaEasy na-agafe ule siri ike iji hụ na etinyere ya na ụdị ha dị ọcha, na-ebuga ha n'ụlọ gị na-enweghị mmerụ mmiri, kemịkal mmiri agbakwunyere ma ọ bụ dilutants. Kemgbe mbido, AromaEasy na-agba mbọ iweta ịdị mma na obi ụtọ na ndụ ndị ọ na-emetụ.
Banyere nka na uzu ohuru anyi
AromaEasy na-ebubata mmanụ na ndị na-ekesa ihe dị mkpa na 70,000 + isi ndị na-ere ahịa, salons & hotels n'ofe North America. Anyị na-ege ntị na nzaghachi ndị ọrụ wee weta echiche ọhụrụ maka ịmị mkpụrụ, na-eme ka ndụ gị ka mma.
Ihe na-eme ka ihe di mma nke Aroma, ihe ndi aromatherapy, ihe ndi ozo eji aru ya eme nke odi nma nke igwe Bluetooth®, ebe ndi ozo a na acho uzo, na igwe eji akpo ugboala bu ihe omuma atu nke ihe oma nke AromaEasy ™ ekpughere uwa. Ọrụ anyị bụ itinye usoro dị elu ka anyị wee mee ụwa ka ọ dị mma.
Buru onye ahia
Dịkwuo nloghachi na itinye ego na AromaEasy n'ùkwù ma ọ bụ mmekọ mmekọ. Lee na AromaEasy
frankincense mkpa mmanụ uru Mkpa mmanụ ejirila ọtụtụ puku afọ maka ha [...]
esi eme ka aka na-edozi aka Ee, ọ dịghị ihe na-akụ aka aka ruo ugbu a na-egbochi ọrịa dị ka [...]
Nke a bụ ntuziaka dị nkenke nke AromaEasy na mmanụ dị mkpa maka ọnya ọnya nwere ike bụrụ ihe na-akpasu iwe [...]
Mmanụ dị mkpa maka azụ mgbu A na-amụ na-egosi na ihe dị ka pasent 80 nke ndị America na-enweta [...]
Mmanụ ndị dị mkpa sitere na osisi na-ekere òkè mgbe niile n'ememe ime mmụọ, na-enyere ndị mmadụ aka ịnọ [...]
Nke a bụ ntụziaka dị mkpirikpi AromaEasy banyere mmanụ dị mkpa iji gbuo nje n'oge a siri ike, [...]
Nke a bụ ntuziaka kachasị nke AromaEasy maka otu esi eji mmanụ dị mkpa na ịsa ahụ. [...]
Ihe post a bu ihe omuma n’icheputa mmanu ndi di nkpa maka mmiri ocha [...]
Ulo oru n’uwa nile tukwasiri obi
AromaEasy iji wuo ahia ha